MACLUUMAADKA TARANKA NOOCYADA 'COCKER PUG DOG' IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noocyada 'Cocker Pug Dog' iyo Sawirro
Cocker Spaniel / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
Shay Cocker Pug (Cocker Spaniel / Pug mix) markuu 2 sano iyo 5 bilood jiro— 'Baby Shay Marie Jinkins waa awood firfircoon oo lagu xisaabtami karo. Diva A iyada xaq u gaar ah. Marwalba way heshaa dariiqeeda maxaa yeelay waa eey caqli badan. Xayawaankii ugu weynaa ee aan soo marnay.
Cocker Pug ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Cocker Spaniel iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Kani waa Pedro the Pugger Spaniel (Pug x Cocker) oo ka yimid Nottingham, England. Wuxuu ahaa 4 sano jir maalinta Kirismaska. Wuxuu ka buuxo tamar aadna ugu xoogan eyga yar. Aad u feejignaan, caqli badan, madax adag oo jecel fiiro gaar ah. Pedro gabi ahaanba wuu ku fiican yahay carruurta. Ma daali karo isaga, xitaa socodka ugu dheer. Waqtiga kaliya ee uu na ceebeeyay waa markay dhex joogaan dad xiran dharka hi-viz, koofiyadaha baseball iyo niqaabka. Guud ahaan wuxuu leeyahay dabeecad fantastik ah mar walbana wuxuu nagu maaweelinayaa qormooyinkiisa.
'Sparky's wuxuu ahaa isku dhafka hooyadiis oo ahaa muwaadin Mareykan ah oo Cocker ah Spaniel (buff), iyo aabihiis oo ahaa Pug daahir ah (fawn). Wuxuu ahaa cabir Cocker buuxa oo culeyskiisu yahay 35 rodol. Dhegihiisu way dheeraayeen sankiisuna wuu gaaban yahay, laakiin si buuxda ugama uusan soo bixin. Dabada ayaa u duubnayd sidii Pug oo kale. Dharkiisu way gaabnaayeen, weyna weynaadeen oo dhumuc weyna u ekaayeen sida Pug oo kale, laakiin dabadiisa ayaa dabacsanayd. Indhihiisu waxay ahaayeen kuwo caan ah, laakiin 'umaqannin' sidii Pug oo kale. Waxaa si isdaba joog ah loogu qalday eey yaryaroo Mastiff ah, xitaa ilaa sagaal jir. Dabeecada Sparky waxay ahayd mid xitaa xanaaq badan, dulqaad leh oo jaalle ah. Marna lama uusan kulmin qof aan aqoon. Wuxuu lahaa ruux geesinimo leh oo aan waxba ka baqin. Wuxuu ahaa eeygii ugu farxadda badnaa, oo caan ku ahaa 'waggiisa jirka oo buuxa.' Wuxuu ahaa mid aad u xiisa badan oo ciyaar badan laakiin ma aheyn mid buun buunin kara. '
'Duke miisaankiisu waa 28 rodol. waana 2 jir. Hooyadiis waxay ahayd Cocker Spaniel AKC madow oo aabihiisna wuxuu ahaa faug Pug AKC. Dabadiisa ayaa u eg Cocker Spaniel oo ku xidhan. Wuxuu leeyahay jaakad madow oo aad u jilicsan oo dhalaalaysa. Isagu waa adag yahay sida Pugga laakiin cabirka Cocker. Isagu waa kan ugu fiican labada adduun. Si fudud ayuu u ahaa tababar si aad u fadhiisato , jiifso, rogrog, joog, iyo wax kasta oo quruxsan. Waxaad moodaa inuu ogyahay waxaad leedahay. Isagu ma ahan mid aad u sarreysa sida Pug, laakiin marna tamar kama dhinto socod dheer . Duke waa eey dhabta ku faraxsan oo macaan oo jecel inuu raalli geliyo, haddana ilaaliyeheenna weyn!
'Tani waa Sam. Isagu waa 6 bilood jir Cocker Pug. Wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay shakhsiyadda Cocker jecel yahay inuu ciyaaro. Isagu waa 25 lb.
'Sebastian the Cocker Pug puppy at 3 bilood jir-waalidkiis labaduba waxay ahaayeen 18 rodol. wuu weynaaday, markaa waxaan qiyaasayaa inuu isku mid noqon doono. Isagu waa arday jecel, firfircoon oo jecel, leh dabeecad weyn. Waxaan u maleynayaa inuu tusaale fiican u yahay Cocker Spaniel x Pug qurux badan. '
Sebastian madow Cocker Pug eey yar oo jira 3 bilood
'Bindi eeyaha yar yar ee Cocker Pug ee jira 2 bilood jir - waa qof caqli badan. Hal bil gudaheed ayay baratay fadhiga, sugida, iskaga tag, jiifso, iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa xiisaha leh: qoob-ka-ciyaarka, wareejinta, gariirka, hadalka iyo rogrogmada.
'Bindi the Cocker Pug puppy at 7 bilood jir culeyskiisu waa 15 rodol. sawirkaan, markii ugu horeysay ee aan helnayna waxay culeeshay 1 lb ... aad bay u yartahay !!! Hooyadeed waa 10-lb Pug madow aabeheedna waa 20-lb. shukulaatada Cocker Spaniel. '
Cudjoe Key Key Coug Pug oo 6 jir ah— 'Cudjoe Key wuxuu ahaa Cocker Pug oo ahaa kan ugu daacadsan, jecel iyo eeyga ugu fiican inuu ag joogo. In kasta oo ay ahayd 35lbs oo keliya, waxay u dhaqantay sidii inay ka weyn tahay oo waxay hoggaamiye u ahayd dhammaan eeyahayada. Cudjoe wuxuu ahaa eey qoys weyn oo aan cidna dhaawici doonin. Nasiib darrose, iyadu waxay ahayd 8 jir markii laga helay cudurka 'lymphosarcoma' kansarka maqaarka ) iyo waxyar kadib markuu dhintey. Waxay dagaal gelisay ilaa dhamaadka waxaana naga tagay qalbi jab.
Eeg tusaalooyin badan oo ku saabsan Cocker Pug
7 toddobaad puppy bulug
Boqor Charles spaniel madow iyo caddaan
shaybaarka shey bernard mix puppy
eeyaha sirta ah ee ey adhijirka Jarmalka